1000M isiri-PoE Vagadziri & Vatengesi - China 1000M isiri-PoE Fekitori
Akangwara Cloud Platform
Data Center Chinja
L3 + Chinja
L3 Maindasitiri Chinja
Nyore Yakagadziriswa Chinja
SMB Kuwana Mutongi
Multi-musimboti Security Gedhi
ISP Network Solution
DCFW-1800 Series Inotevera Gener ...
DCRS-7600E Nhepfenyuro Core Laye ...
ES1208 Gigabits Isingatarisirwe Chinja
ES1208 ndeye 8-chiteshi 10/100 / 1000mbps isingadzoreke Ethernet switch uchishandisa Realtek RTL8370N chipset. ES1208 inovimbisa inoshanda bandwidth kugoverwa kune yega chiteshi nechitoro-uye-mberi nzira yekufambisa uye ine simba ndangariro kugoverwa. Iyo inopa sere 10/100 / 1000Mbps adaptive ports inowirirana ne10base-T, 100base-TX uye 1000Base-T network nharaunda, auto-kutaurirana iyo chiteshi kumhanya 10/100 / 1000Mbps. Zviratidzo zve LED zvinogona kuratidza simba uye netiweki kubatanidza / kudambura zvine simba. ES1208 idiki li ...
ES1210P Gigabits Isingatarisirwe Chinja
ES1210P switch ndeye DCN yakazara-gigabits isingadzoreke switch, ichipa masere 10/100 / 1000Mbps machipisi ekugadzirisa uye maviri 100 / 1000Mbps SFP optical ports, ese ayo anotsigira waya-yekumhanyisa kutumira. Zviratidzo zve LED zvinogona kuratidza simba uye netiweki kubatanidza / kudambura zvine simba. ES1210P ine yakakwira yekubatanidza dhizaini, kurema uremu uye nyore oparesheni, inokodzera diki uye yepakati-saizi hofisi uye chengetedzo yekuwana network. Inosanganisira Zvibvumirano neIEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az ...
ES1226P Gigabits Isingatarisirwe Chinja
ES1226P ndeye DCN yakazara-gigabit isingatarisirwe yekuwana switch, ichipa 24 10/100 / 1000Mbps auto-kutaurirana RJ45 madoko uye maviri 1000mbps SFP chiteshi. Hapana kumisikidzwa kunodiwa kana mudziyo waiswa, uye waya-yekumhanyisa kutumira kwese kwiteshi kunogona kuzadzikiswa mushure mekunge simba rabatana, iro rinogona kusangana nemhando dzakasiyana dzeEthernet dzekuwana. ES1226P chishandiso chakasarudzika chemabhizinesi, maInternet cafes, nzvimbo dzekugara uye kambasi network kuvaka gigabit kuwana. Inosanganisira Zvibvumirano neIEEE802.3, IEE ...
ES1224 Gigabits Isingatarisirwe Chinja
ES1224 switch ndeye DCN yakazara-gigabits isingadzoreke switch, ichipa makumi maviri nemana 10/100 / 1000Mbps machipisi ekugadzirisa, ese ayo anotsigira waya-yekumhanyisa kutumira. ES1224 inovimbisa inoshanda bandwidth kugoverwa kune yega chiteshi nechitoro-uye-mberi nzira yekufambisa uye ine simba ndangariro kugoverwa. Iyo zvakare inotsigira kuyerera kudzora iyo inogona kunyatso kudzivirira kurasika kwepaketi mukutapurirana uye kugamuchirwa. Energy Inoshanda Ethernet yakajairwa IEEE802.3az pane ES1224 inoita kuti igone zvinobudirira kudzora kushandiswa kwesimba uye ...
ES1216 Gigabits Isingatarisirwe Chinja
ES1216 switch ndeye DCN yakazara-gigabits isingadzoreke switch, ichipa gumi nematanhatu 10/100 / 1000Mbps machipisi ekugadzirisa, ese ayo anotsigira waya-yekumhanyisa kutumira. ES1216 inovimbisa inoshanda bandwidth kugoverwa kune yega chiteshi nechitoro-uye-kumberi kuendesa nzira uye ine simba ndangariro kugoverwa. Iyo zvakare inotsigira kuyerera kudzora iyo inogona kunyatso kudzivirira kurasika kwepaketi mukutapurirana uye kugamuchirwa. Energy Yakashanda Ethernet yakajairwa IEEE802.3az pane ES1216 inoita kuti igone kunyatsoderedza kushandiswa kwesimba uye prot ...
Kero:Dhijitari Technology Plaza, NO.9 Shangdi 9th Street, Haidian Dunhu, Beijing, China
Runhare: +86 400 810 9119
Runhare:+86 (10) 82707033